Published | Page 131 | ShweHub brought to you by ShweRoom
iPad လက်နှိပ်စက် သို့မဟုတ် iTypewriter
By jackiekyaw 3384 days ago on သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ from techspacejournal.blogspot.sg
လက်နှိပ်စက်သုံးတဲ့ခေတ် ကုန်သွားပေမယ့် ရှေးနောက်မှီ စာရေးဆရာများကတော့ လက်နှိပ်စက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်က ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာအချို့ တောင် လက်နှိပ်စက် (Typewriter) နဲ့ စာတွေရေးသားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တလော Facebook တွင် အထူးရှောင်ရှားရမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
လက်တလော Facebook မှာ Policy ခဏခဏ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်သတင်းတွေထဲမှာ Facebook တွင် အကောင့်အတုပေါင်း သန်း ၈၀ ကျော်ရှိတယ်လို့လည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook ဟာ အကောင့်အတု များကို ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook အသုံးပြုသူများ အောက်ပါအချက်များကို သိထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
By yeaungnaing 3384 days ago on ပြည်တွင်း from shwemyanmarmediagroup.blogspot.sg
ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စယင်လပ်ရှင် နာဝပ် သည်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်းနှင့်
ပတ်သက်သော ကိစ္စများ ဆ က် လက်ဆွေးနွေး
ရန်နှ င့်နှစ်နို င်ငံ သဘော တူထား သည့်
က တိက ၀ တ်များကို ဆက်လ က်ေ ဆွးနွေးရန်စ က်တင်ဘာ လအ တွင်းလာ ရောက်မ ည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် ကိုကိုးကား ကာသည်နေရှင်းသတင်း စာ ကဖော်ပြ သည်။
မုံရွာတက္ကသိုလ် ရူပဗေဒဌာနမှ ပါမောက္ခဌာနမှူး လာဘ်စားမှုအပေါ် ကျောင်းသားများ မကျေမနပ်ဖြစ်နေ
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာတက္ကသိုလ်တွင် ရူပဗေဒဌာ
နရှိ ပါမောက္ခဌာနမှူးမှာ ကထိကဆရာမတစ်ဦးနှင့်
ပေါင်း၍ ကျောင်းသားများထံမှ မတရားငွေကြေး
တောင်းခံ လာဘ်စားမှုအပေါ် ကျောင်းသားများက
မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြကြောင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ သတင်းပေးပို့ချက်
အဆိုပါ ဆရာနှစ်ဦးပူးပေါင်း၍ ကျောင်းသားများအား ပုံနှိပ်စာအုပ်များကို ဈေးမြှင့်ကာ မဝယ်မနေရစနစ်ဖြင့်ရောင်းပြီး၊ Term Paper လက်မှတ်ထိုးခများနှင့် မဟာတန
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ နိုင်ငံခြားဇာတ် လမ်းတွဲများ၊
ဇာတ်ကားများကို ကြည့်ရှုသူအများစု အားထား
နေ ရသော လက်လီရောင်းချသည့် လမ်းဘေးခွေ
ဆိုင်များမှာ ခိုးကူး နှိမ်နင်းရေး စီမံချက်ကြောင့် ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ပြည်ပဇာတ်
ကားများ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ ကြည့်ရှုလိုသည့်ပရိသတ်များ အခက်တွေ့နေသည်။
By suwatisoe 3384 days ago on လူမှု့ဘဝ from www.thettantcho.com
တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်က လိပ်ပြာဖြစ်လာမယ့် ပိုးအိမ်ကလေးကိုတွေ့မိတယ် ။ အထဲမှာတော့ လိပ်ပြာဘ ၀မရောက်သေးတဲ့ ပိုးတုံးလုံးလေးပေါ့ ။ အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီး သူက အဲဒီပိုးအိမ်ကလေးကို နေ့တိုင်း ဘယ်အချိန်အကောင်ပေါက်လာမလဲဆိုပြီး ဂရုတစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ -- အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ လက်သမားဆရာကြီးတစ်ယောက်ဟာ အသက်အရွယ် အရသော်လည်းကောင်း အေးအေးလူလူနေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း အနားယူချင်နေခဲ့တယ်
လူငယ်တစ်ယောက်မှာ အချစ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး
By sandarmoe 3384 days ago on ဖျော်ဖြေရေး from www.myanmar-models.com
ဖွေးဖွေးရဲ့မွေးနေ့က သြဂုတ် ၉ ရက်နေ့ပါ။ မွေးနေ့တိုင်းမှာသတိထားမိသလောက်က အလုပ်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ ထူးထူးခြားခြားရိုက်ကွင်းရောက်နေတယ်။ ၂၄ နှစ် ပြည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားမှုဆိုရင် လူကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ခံစားရတဲ့အတွက် ပျော်နေ ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတွေးစရာတွေပိုများလာပါတယ်။ လူ့ဘဝမှာအသက်ရှင်ဖို့ တစ်နှစ်ပိုလျော့သွားတာပေါ့နော်။ မွေးနေ့မနက်မှာပထမဆုံး Birthday wish လုပ်တာက ဖေဖေနဲ့ မေေ
မိုးဟေက ဒါရိုက်တာဟ်ိန်းစိုးရိုက်ကူးတဲ့ကားတစ်ကားမှာ ယောကျာ်းကိုတအားချစ်တဲ့ သဝန်တို တဲ့မိန်မတစ်ယောက်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ မိုးဟေကအိမ်ထောင်ရေးဇာတ်အရိုက် များပေမယ့် ဇာတ်ရုပ်မထပ်အောင်ရွေးချယ်ရိုက်ကူးပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွေကလည်း လာက တည်းကရင်းပုံစံမတူဘဲကွဲပြားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကံကောင်းပါတယ်။
By miemiekhine 3384 days ago on ဟာသ from mmjokes.com
အမြဲလှနေစေဖို့ လျှို့ ဝှက်ချက်များ
By miemiekhine 3384 days ago on ကျန်းမာရေး from shwebeauty.com
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှအပဆိုတာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု၊ စတိုင်ကြမှု၊ ခန့် ညားမှု နဲ့ယုံကြည်မှုတွေရဲ့ပေါင်းစီးထားတာပါ။ မြန်မာမလေးများအားလုံး အမြဲ လှပနေအောင် Wiki How မှ Ben Rubensteinေ၇းသားတဲ့ How to Look LikeaModel ဆောင်းပါးလေးကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ အားလုံးပဲ...
ဒီကောင်လေး ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စား နေတာလား?
By miemiekhine 3384 days ago on ဖျော်ဖြေရေး from shwebeauty.com
သူ ပျိုမေ့ကို စိတ်ဝင်စားနေတာများလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းလိုပဲ သဘော ထားနေတာလား တွေးရခက်ကြီးဖြစ်နေရင် အသေအချာ သိဖို့ သဲလွန်စလေးတွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။။ စိတ်ဝင်စား တယ် ဟုတ်? (1) သူနဲ့စကားပြောကြည့်ပါ။ သူ့ ကို သင် လှမ်းနှုတ်ဆက် တာကို အတိုင်းထက်အလွန် ပြုံးဖြီးဖြီးကြီးဖြစ်နေတာ၊ မက်ဆေ့(ဂ်ျ) ပို့ရင် ရတာနဲ့ ချက်ချင်းစာပြန်တာ တို့က ကောင်းတဲ့...
နေ့စဉ်လိမ်း မိတ်ကပ် အဆင့်ဆင့်ကို ဓာတ်ပုံ Tutorial တစ်ခု ဖော်ပြခဲ့ဖူးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ http://shwebeauty.com/?p=2020 အဲဒီ တုန်းက eyeshadow (၂) ရောင်သုံးပြီး အဆင့်ဆင့်ကို စာရေးခြင်း ဖြင့်သာ ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ကျရင် ဗွီဒီယိုနဲ့ သေချာ အဆင့်ဆင့် ကို ပြသနိုင်ဖို့ အိပ်မက် မက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ အိပ်မက်ကို အခု အကောင်အထည်ဖော်ရင်း...
By miemiekhine 3384 days ago on ဖျော်ဖြေရေး from www.99sanay.com
လူ့ဘဝရဲ့ အဓိကစိန်ခေါ်မှုက ကိုယ်လက်အင်္ဂါချွတ်ယွင်းချက်ကြောင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အပေါ်မြင်တဲ့ လူတွေရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အမြင်ကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုသင်ယူရမယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ သူထင်ခဲ့တယ်။
ကမ္ဘာ့အကျိုးဆောင်နိုင်ငံသားဆု လက်ခံဖို့ ဒေါ်စု နယူးယောက် လာမည် : Myanmar News Hub
By admin 3418 days ago on ပြည်တွင်း from www.myanmarnewshub.com
YOYARLAY - ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ကောင်တည်း ကျန်ရှိတဲ့ အကြီးဆုံးကုန်းလိပ်ကြီး သေဆုံးရှာပြီ
By admin 3418 days ago on ဖျော်ဖြေရေး from yoyarlay.com
ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ကောင်တည်း ကျန်ရှိတဲ့ အကြီးဆုံးကုန်းလိပ်ကြီး သေဆုံးရှာပြီ
X Factor အဆိုးဆုံး ဖျော်ဖြေမှု
By admin 3418 days ago on ဟာသ from www.youtube.com
« previous1...126127128129130131 next »